राष्ट्रवाद यदाकदा हैन सदासदा हुनुपर्छ
राष्ट्र, रास्ट्रिय अस्मिताको सबालमा सरकार कति संविदंशील छ भन्ने कुराको प्रमाण हो यो । राष्ट्र तरंगित र आन्दोलित छ तर सत्तालाई यी सब विषयले जति छुनुपर्ने हो त्यति छोएको छैन । आफ्नो बिद्यार्थी संगठनले बिरोधको कर्मकाण्ड पुरा गरेकै छ सरकारलाई हाइ सन्चो छ । कुटनीतिक लडाई हो लड्नुपर्ने तर त्यसको लागि सरकारले सर्वदलीय बैठक यथाशीघ्र सकेर देशको एक स्वर एक धारणा बनाउनु पर्ने हो । तर सुस्त छ सरकार ।
बुबा हुदाँहुँदै हामीलाई टुहुरा बनाइयो
१० वर्षको अवधिमा यो धर्ती १७ हजार मानिसको रगतले सिञ्चित भयो । १५ सय जति अझै नै बेपता छन् । धेरैका सिन्दुर पुछिए, काख रितिए, टुहुरो बनाइए । धेरै भौतिक सम्पतिको क्षति भयो । १० वर्ष धेरै कष्टले बाँचे । मुलुक ५० वर्ष पछि भयो विकासको गतिमा । त्यो समयमा अहिलेको समयको कल्पना कोही कसैले सायदै गरेन ।
२३ वर्षको अन्तरालमा नेपाल आएका चिनियाँ राष्ट्रपतिलाई मुरीमुरी धन्यवाद दिँदै हामी जस्तो सानो आकारको भूगोलमा रहेको छिमेकीको भुभाग दुई ठूला छिमेकी मिलेर चरप्प पार्दा एक पटक नेपाललाई पनि सोध्नु पर्छ कि भनेर किन नभनेको महामहिम भन्न के ले छेक्यो हाम्रा प्रधानमन्त्रीलाई ? कि सोधेर पनि यो जनतालाई जानकारी दिनु जरुरी नभएरै नभनिएको हो ?
पत्रकारलाई निर्वाध काम गर्ने वातावरण कसरी कायम गर्ने ?
पत्रकारहरुको विरुद्धमा गरिने कुनै पनि प्रकारको बाधा र हिँसाको अन्त्यका लागि पनि दण्डहीनता विरुद्धको आम चेतना वृद्धि गरौँ र समाजका सबै वर्गलाई यसका लागि आवाज उठाउने बनाऔँ । चेतनाले जुन काम गर्नेछ, त्यसकाले दण्डहीनताको अन्त्यका लागि काम अवश्य गर्नेछ ।
प्रधानमन्त्री ज्यू, देशका लागि धेरै गर्नुभो, अब स्वास्थ्य लाभ गर्नुस
१२ वर्ष अघि मृगौला प्रत्यारोपण गरिएको शरीरले आज अर्काको मृगौला नचिनेर समस्या हुदै गरेको, बारम्बार समस्या निम्तिन थालेकोले प्रधानमन्त्रीको शरीरबाट अब धेरै कामको अपेक्षा गर्नु पनि हुन्न । उहाँ गल्नु भएको छ । रोगले भित्र भित्रै गालेको छ ।
कसरी मनाइन्छ छठ पर्व ? यस्ता छन् मुख्य विधि
के हामी चीनतिर बढी नै ढल्केकै हो त ?
एकातिर हामी चीनसँग सुशासनका लागि सहयोग माग्दैछौँ, नेपालको पूर्वाधारका लागि धेरै कुरा मागिरहेका छौँ र चीनले पनि बेल्ट एन्ड रोड इनिसिएटिभका सहभागी भएका कारणले सहयोग दिने बचनबद्धता प्रकट गरेको छ । सिल्क रोडको बाटो हुँदै हामी नेपालीहरु विश्वको बजारमा सहजै सडकमार्फत् पुग्ने अपेक्षा गरिरहेका छौँ ।
मानवता बिरोधी जघन्य अपराधहरु कानुनको दायरा भित्र ल्याइनुपर्छ
चुनावमा हुने हिंसात्मक घटना, सबै राजनीतिक पार्टीले गर्ने बलमिच्याई र कुटपिट मारकाटलाई चुनावमा यस्तै हुन्छ यसलाई सहनु पर्छ भनेर कानुनी उपचारमा नलैजान अघोषित सहमति बन्यो । जसले गर्दा चुनावको खुन खराबीमा वृद्धि भयो र चुनाव उत्सवमय नभएर अपराधमय र युद्दमय त्राशदीको दिनको रुपमा परिचित बन्दै आतंक भय र त्राशको घडीमा बदलियो ।
'स्याटरडे प्लेन एअर' अभियानको जीवन्त मध्यपुर
निश्चित ठाउँमा स्वस्फूर्त सहभागी हुन चाहने कलाकारले सामाजिक सञ्जाल फेसबुकमा भएको स्याटरडे प्लेन एअर पेज र च्याट ग्रूपमा खबर गर्न सक्छन् । निश्चित ठाउँलाई क्यानभासमा उतार्न सोही अनुकूलको समय र नाउँ जुराएर योजना बुन्ने गरेको छ । काभ्रेको लागि जुराएको अभियानको नाउँ ‘सभ्यताको सौन्दर्य’ हो ।
यस्तो पाराले एनआरएनए चल्दैन
संस्थाको विधि, विधान र हालसम्म कायम राखेको प्रतिष्ठामा थोरै भए पनि आँच आएको छ । सामाजिक संजालमा ब्यक्त भएका भावनाहरुलाई मात्र केलाउने हो भने एनआरएनए र यसका केही अभियन्ताहरुलाई क्षमा दिन सक्ने अवस्था देखिदैन ।